Nzvimbo: maitiro ekuisa nhanho nhanho paLinux | Linux Vakapindwa muropa
Spotify: maitiro ekuisa pane Linux nhanho nhanho
Isaac | | Multimedia, Linux software
Spotify ari piyona maererano nemimhanzi yemahara kuburikidza ne steraming, pasina kupokana chimwe chinhu chakange chakumbirwa kubva padivi revashandisi uye vashoma vanga vachida kunzwa. Ivo avo vanopesana nehusimbe vanongotsvaga mazano zvisirizvo zvisina musoro, dzimwe nguva zvichiganhurana nehupenzi uye dzimwe nguva vachipa humbowo hwehupenzi hwevanhu. Asi Spotify akagona kugutsa avo vanoda mimhanzi yemahara uye pasina kuve zvisiri pamutemo.
Spotify chishandiso icho akaberekerwa muStockholm, Sweden. Izvo zvakaitwa nekambani yeSweden kusaina zvibvumirano nemakambani akarekodha seUniversal Music, Sony BMG, EMI Music, Hollywood Records, Interscope Records uye Warner Music, pakati pevamwe, kuti vakwanise kupa mimhanzi yavo mahara. Nekupa izvo izvo zvinoshandiswa nevashandisi, kubva munaJune 2015, yakakura zvakanyanya, iine vanopfuura mamirioni makumi manomwe neshanu vashandisi vanoshanda.
Sezvinoratidzwawo kubva pawebhu, vanoshanda kuti vasasiya iyo Linux app kumashure nezve kuburitswa kunanga Windows, Mac OS X, uye mamwe masisitimu anoshanda. Nekudaro, Spotify parizvino yakagoverwa muDAP mapakeji eDebian uye zvigadzirwa, zveshuwa kune Ubuntu uye zvigadzirwa, sezvo ichi chiriwo cheDebian chinobva distro. Kana iwe uine imwe distro, zvinosuruvarisa kuti ivo havapi mapakeji uye iwe unofanirwa kusarudza kushandisa Waini kuitira kuti uise iyo yemuno app yeWindows. Imwe sarudzo inoitika kwandiri, kunyange isingakurudzirwe, kushandura iyo DEB kuita RPM kana imwe mhando yepakeji ine chishandiso. mutorwa.
Para kuiswa kwako Pakugovera kunotsigira mapakeji eDEB, unogona kutevedzera nhanho idzi:
Wedzera kiyi yekuchengetera kurodha pasuru, yeiyo kubva kune inouraya, mhando:
Ipapo isu tichaenda kuwedzera iyo Spotify repository:
Iye zvino isu tinogadziridza runyorwa.
Chinhu chekupedzisira kuisa Spotify mutengi uye isu tichava nazvo zvakagadzirira:
Zve newbies, yeuka kuti mushure mekupinda yega yega mitsara iwe unofanirwa kumanikidza ENTER kuti iite ... Zvakare, kana uchishandisa Sudo inokumbira iwe password yako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Multimedia » Spotify: maitiro ekuisa pane Linux nhanho nhanho
Abd hessuk akadaro
Huya, izvozvi usingashandisi xD terminal
Pindura kuna Abd Hessuk
Pindura kuna Elena
Iwe waifanirwa kutsikirira kupinda iyo mwedzi yakarasika usingashandisi linux uye ini ndaifunga kuti raive dambudziko repc yangu.
Pindura kuna nhoi
Hahaha kwete murume, ndinozvitaura kune avo vanova kekutanga kuona tambo yekuraira, hazvisi izvo kuti ivo vanongonamira mitsara vomirira kuti vaone kana ichipindura ... ndinopika kuti pane anopfuura mumwe kunze ipapo ... iwe ungashamisika kuona mimwe mibvunzo ichibvunzwa.
Nhare mbozha inopera bhatiri zvachose .. Zano rakanaka rekuisa pakutenga… .asi zvakadaro harishande. Yatyoka…
Zvakanaka kwete. Iwe waifanira kungoibatidza !!!
Kudzvanya bhatani kweanopfuura maviri masekondi.
Muridzi wacho haana kuziva. Nyaya chaiyo kubva masikati ano.
Unoyeuka iyo yekutanga Pulsen. Kuti iwe hauzive ...
"Kana iwe uine imwe distro, zvinosuwisa kuti havape mapakeji uye unofanirwa kusarudza kushandisa Waini kuitira kuti uise iyo yekuzvarwa app yeWindows"
Zvinotaridza kwandiri kuti wakashandisa mashoma distros, izvi manyepo kupfuura Judas. Mune iyo AUR repo yechero arch iri spotify.
Aleph Zero akadaro
Mhoroi, ini ndiri mutsva kuUbuntu, ndine vhezheni 15.10, iyo yandakamisa 2 mazuva apfuura. Ini ndashandisa Linux asi kungofamba nenzira Yakadzika neMiswe, ini ndine ruzivo asi chete zvekutanga. Ndakaisa Spotify pasina matambudziko neThe Terminal, asi handikwanise kubvisa kushambadza kunoonekwa mushure meimwe nhamba yenziyo. Mumwe munhu aigona kundipa mhinduro here? Kuongorora ndakawana mhinduro asi hapana yeshanduro 15.10. Mumwe mubvunzo, zvinokurudzirwa here kuenderera neshanduro iyi kana kuchinjira ku14.04.3 LTS?
Pindura kuna AlephCero
uye gare gare? Izvo hazvina kundishandira ... mitsara yakawanda yakati kukanganisa
Pindura kuna luisa
Morgan trimax akadaro
ndeyekuti "kukanganisa" kwako kuri kushandisa linux
Pindura Morgan Trimax
Chembere yako muruzevha akadaro
YAKO "Kanganiso" inofanira kuve yakaganhurirwa Morgan
Maitiro ekurodha pasi YouTube nziyo kana mavhidhiyo
Microsoft inopa zvimwe zvikonzero zvekusashandisa Windows